Roborock S7: Yekupedzisira-kumagumo kuchenesa izvozvi ne ultrasonic kukwesha | Gadget nhau
Miguel Hernandez | 18/04/2021 16:00 | General, Reviews
Robot vacuum cleaners dzakura muhukuru uye kugona nekufamba kwenguva, izvo zvakatanga sechigadzirwa zvine kumwe kupokana kushanda, chave chigadzirwa chinokwanisa kuita kuti hupenyu hwedu huve nyore, kunyanya kana zvasvika kune iyo brand. Roborock, nyanzvi mune epamusoro-magumo marobhoti akangwara.
Tsvagurudza nesu ndeapi ese matsva ayo uye kana mutsauko uripakati pekupedzisira-robhoti ma vacuum cleaners unoenda kupfuura mutengo, zvichave zvakakosha here?
Sezvo pane dzimwe nguva zhinji, ino nguva futi tafunga kuisa vhidhiyo mukuongorora kwedu, isu takangofunga kuumba "yakakosha" vhidhiyo mauchakwanisa kuona zvakawanda kupfuura ongororo yakapusa, iwe unenge uine chaiyo yakajeka ruzivo uye ruzivo nezve kumisikidzwa kwechigadzirwa uye zvimwe zvakawanda. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa chete kuridza vhidhiyo kwaunowana iwo ese ruzivo iwo mazwi asingakwanise kuzvigadzirira ega. Tora mukana wekunyorera kune yedu YouTube chiteshi uko iwe kwaunowana yakawanda yezvinyorwa uye utibatsire isu kuramba tichikura.
1 Dhizaini: Imba mhando
2 Unyanzvi Magadzirirwo: Hapana chinoshaikwa
3 Iyo Roborock app, imwe yakawedzera kukosha
4 Akasiyana ekuchenesa uye kukwesha modes
5 Kuchengetedza uye kuzvimiririra
Dhizaini: Imba mhando
Roborock anoramba achibheja pane chimwe chinhu chinoshanda. Dhizaina dzake dzinoonekwa zviri nyore uye izvo zvakamupa iye kugutsikana kukuru pakati pevashandisi vake. uye zvechokwadi kutengesa kuzhinji. Kune akawanda ma edhisheni ane akafanana akafanana dhizaini, iine yepakati inokanda kumusoro, yakatenderera zvakakwana uye yakati rebei mudziyo unofambidzana nemaviri shades kusarudza kubva, chena kana nhema. Ehezve, senguva dzose isu tinobheja pazvinhu zvepurasitiki, matatu ekumisikidza mabhatani ari pamberi epakati uye LED inopindirana inoshandura hue yayo zvichienderana nebasa rinomiririrwa.
Vipimo: 35,3 * 35 * 9,65 cm
Isu tine butiro rekumashure iro kana tichisimudza rinotiratidza tangi rakasimba uye iyo WiFi chiratidzo. Pazasi isu tine iyo yepakati yerabha roller, yayo inotora, vhiri bofu uye imwechete "muunganidzi", ino nguva yakagadzirwa nesilicone. Tangi remvura uye nekugadziriswa kwepurubhi pad kunosara kumashure. Dhizaini yakafanana neiya yakaonekwa kusvika parizvino, hongu, mhando yezvigadziriso uye iyo lIzvo zvinhu, izvo zvinokurumidza kutiita kuti tizive kuti tiri kubata nechakanaka kwazvo chigadzirwa. Isu hatiwane mune package, ehe, chero mhando yekutsiva yezvinhu zvekuchenesa.
Unyanzvi Magadzirirwo: Hapana chinoshaikwa
Isu tinoenda takanangana nesimba rekutsveta, chimwe chezvikamu zvine mutsindo zvakanyanya kana zvasvika pakusiyanisa rudzi urwu rwechigadzirwa. Hapana chakaderera pane 2.500 Pascals izvo zvinokurumidza kutiita kuti tione kuti iyi Roborock S7 iri kuzokwanisa nemarudzi ese evhu. Kuti uchengetedze zvaunounganidza, zvine dhipoziti yemamirimita 470 iyo inoburitswa kubva kumusoro uye ine HEPA firita kutsiva kana zvichidikanwa.
Tine WiFi yekubatanidza kushandisa yako application, inowirirana zvizere ne Alexa, Siri uye Google Mubatsiri. Tichitaura izvozvi nezve ultrasonic kukwesha, isu tinotarisa pane chokwadi chekuti isu tine dhipoziti ye "chete" mazana matatu emamirilita iyo yatichataura nezvayo inotevera. Izvo zvakakosha kuti utaure kuti zvinongoenderana chete ne300GHz WiFi netiweki kuti uwedzere nzvimbo yekushandisa.
Tine chiteshi chakaringana uye chinowanzojaja chiteshi cheiyo brand, ine chinongedzo chemamiriro akatungamira uye netambo yemagetsi yekubatanidza. Ehezve, zvirinani iyo transformer inosanganisirwa muchitsiko icho chinopa kuita kwakaringana mashandiro maererano nekushandisa.
Iyo Roborock app, imwe yakawedzera kukosha
Software chinhu chakanyanya kukosha chikamu. Kugadziriswa kwayo kwekutanga kuri nyore kwazvo:
Dhawunirodha app yachoiOS / Android)
Vhura iyo Roboorock S7
Dhinda mabhatani maviri erutivi rweRoborock S7 kudzamara iyo WiFi LED ichibhururuka (uko tangi yakasimba)
Tsvaga kubva kuapp
Pinda pasiwedhi yewifi network
Izvo zviri nyore kutora iyo Roborock S7 kumusoro uye kumhanya. Muvhidhiyo yedu uchaona marongero akasiyana pamwe nekukwanisa kushandura mutauro, kuronga nguva dzekuchenesa uye nezvimwe zvakawanda. Nekudaro, zvakakosha kutaura kuti mashandisiro ayo anotibvumidza isu kubata mamepu eimba yedu, kugadzirisa matatu nhanho emagetsi emagetsi, mamwe matatu emagetsi ekutsvaira uye kunyange kugadzirisa nzvimbo dzatinoda kuti dzicheneswe.
Akasiyana ekuchenesa uye kukwesha modes
Isu tinotanga nekushuvira, iyo nzira yatinozonyanya kushandisa uye iyo inoshandisa akasiyana LiDAR sensors kutora mukana wekuita:
Silent mode: Iyo yakaderera nzira yekushandisa iyo inounza chishandiso padyo nemaawa matatu ekuzvimirira.
Yakajairwa nzira: Iyo modhi inobvumidza chishandiso kugadziridza otomatiki simba rekuyamwa zvichibva pakuonekwa kwetsvina nemakapeti.
Turbo maitiro: Chimwe chinhu chakanyanya kusimba uye chine ruzha, kunyanya chinokurudzirwa kana paine hukuru hukuru nemarara.
Maximum maitiro: Iyo inoshandisa 2.500 Pa yesimba, ine ruzha rwakanyanya uye isu tingati kunyangwe kunetsa, hongu, hapazove netsvina inopokana.
Nezve maitiro eRoborock S7 nemakapeti Tinogona kugadzirisa pakati pezvinhu zvitatu zvakasiyana: Zvidzivise; Ramming uye kudzimisa kukwesha; Wedzera simba rekukweva kana rikaonekwa. Ini ndinogara ndichibheja pane yazvino vhezheni uye mashandiro acho anga akasarudzika.
Sarudzo zhinji zvakare dzekutsvaira kweiyo ultrasonic izvo zvakatishamisa isu chaizvo nemabatiro azvinoita. Zvakawanda zvekuti tinogona kuikurudzira kunyangwe parquet kana pasi pehuni, chimwe chinhu changa chiri kuisa njodzi mumidziyo yakafanana kusvika zvino. Ichazunguzika nekuwanda kweanosvika 3000 nguva paminiti. Zvese izvi zvichiri kure nebhuku rekutsvaira maererano neceramic pasi, asi mumaonero angu zvinokwana kugadziriswa kwezuva nezuva kwedheka, hongu, kanganwa nezve kukwesha tsvina ine mukurumbira.
Kukwesha zvine mwero
Ine shambadziro300 millilita dhamu yatinoda kukuyeuchidza, haugone kusanganisira zvigadzirwa zvekuchenesa, iyo mhando pachayo inoratidza kuti inogona kukanganisa simba rechigadzirwa.
Kuchengetedza uye kuzvimiririra
Sezvo iwe uchinyatso kuziva, chishandiso ichi chine chekuchengetedza chiratidzo mune chayo mashandisiro. Nokuda kweizvi tinofanira kufunga kuti HEPA firita inotakurika uye kuti isu tichafanira kutsiva zvizhinji zvezvinoshandiswa mukati memwedzi mitanhatu. Nenzira imwecheteyo, kuchenesa kucharongedzwa zvekuti:
Main bhurasho: Svondo
Rutivi bhurashi: Mwedzi wega wega
HEPA firita: Mavhiki maviri ega ega
Shamba jira: Mushure mekushandisa kwega kwega
Mafoni uye sensors: Mwedzi wega wega
Mavhiri: Mwedzi wega wega
Nezve kuzvitonga, Izvo zvinosiyana pakati pemaminetsi makumi masere nemaminetsi zana nemakumi masere zvichienderana nenhamba yemabasa, izvi zvinobatsira kusvina iyo 80 mAh kubva kubhatiri rako kusvika pakakwirira.
Zviripachena iyi Roborock S7 inozadzisa zvinenge zvese zvakavimbiswa, chimwe chinhu chinogona kutarisirwa kubva muchigadzirwa che549 (AliExpress). Kukwesha kwacho kuchiri kure nekukwesha kwetsika muzviroto zvedongo, zvisinei, kutsvaira uye kushanda kwayo kunoperekedzwa nekushandisa kwakaomarara kunobatsira zvakanyanya kuti uve mumwe wevashoma vanotsvaira marobhoti vanounza kugutsikana kupfuura kutemwa nemusoro. Zviripachena kuti isu hatisi kutarisana neyekupinda-chikamu chigadzirwa, saka kuitora kwayo kuchada kuyera zvatinoda.
Yakatumirwa pa: 18 April 2021
Kugadziridza kwekupedzisira: 17 April 2021
Kunaka uye kuzadza kunyorera
Yakakwira simba rekutsvaira nekuchenesa kugona
Kukwana kwakaringana kwekuchengetedza pallet
Kuzvitonga kwakaringana kwemisha ye90 m2 Kubv.
Izvo hazvisanganise zvinoshandiswa mumutoro
Dzimwe nguva hazvipfuure nemumipengo yakatetepa
Ruzha rukuru kwazvo pamasimba epamusoro
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Reviews » Roborock S7: Yakakwira-kumagumo kuchenesa ikozvino neiyo ultrasonic kukwesha
Iyo yakanakisa chess mitambo yePC